Jupiter's Juno probe mizara ireto sarin'i Jupiter | Famoronana an-tserasera
Ny sary tsy mampino an'i Jupiter izay naverin'i NASA momba ny fikarohana an'i Juno
Misy planeta toa an'i Jupiter, izay ihany jereo ny endrik'izy ireo amin'ny atmosfera izay manarona ny ambonimbony dia mety hamela antsika mihoatra ny very hevitra. Izany no mitranga amin'ireo sary naverin'i NASA's Juno probe.
Hatramin'ny nidirako amin'ny orbit an'ny Jupiter tamin'ny Jolay 2016, ny fikarohana miaraka dia naka sary tsy mampino an'ny planeta goavambe. Ary na dia hifarana amin'ny faran'ny 18 aza ny iraka ampanaovina azy dia mbola hanohy hanadihady miaraka amin'ny famotopotorana hatramin'ny taona 2012 ny NASA, izay ahafahantsika miditra amin'ny sary 41 mahaliana kokoa.
Fisamborana vitsivitsy izay mamela antsika very hevitra ny hafahafa ny toetran'i Jupiter. Juno dia mandefa sary amin'ny endrika RAW tsy misy fatiantoka kalitao, izay ampakarina ao amin'ny tranonkalany ho azon'ny rehetra alaina.
Ny sary farany navelan'i Juno dia mbola nampita izany fahatsapana izany ihany betsaka ny zavatra ho hitantsika momba ny planeta iray toa an'i Jupiter. Tamin'ity indray mitoraka ity dia afaka nanoratra andiana hetsika tsy mampino izay mamela sary mitsoka fotsiny.
Sambory ny tafio-drivotra anticyclonic amin'ny a 7.000 kilometatra ny haavony ary toa ilay crème novokarina rehefa kafe tsara no natao tao anaty kaopy. Sary manome hampiasa sary an-tsaina ary hiara-manidina amin'izy ireo.
Ny iray amin'ireo hevitra nalaina sary indrindra dia ny toerana mena be an'i Jupiter fanta-daza ary amin'ity tranga ity, ilay eo amin'ny sary, dia toa feso feso izay mitsoka ireo onja toa noforonina avy amin'ny atmosfera hafahafa an'ny planeta goavambe.
Sary izay mahazoa karazana sary an-tsaina rehetra ary izany dia mampiseho hoe hatraiza ny fahalalantsika ny tena toetran'ny planeta izay miafina ao ambanin'ny rahona matevina sy tafiotra. Mandra-pahatongantsika mamakivaky azy io, dia tsy ho fantatsika ny fomba ifikirantsika amin'ilay ambonin'i Jupiter.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ny sary tsy mampino an'i Jupiter izay naverin'i NASA momba ny fikarohana an'i Juno
Noho ny bibikely, Adobe mamafa rakitra 100.000 ho an'ny mpamorona